5 Zvisinei, mumwe murume, ainzi Ananiyasi, pamwe chete nomudzimai wake Safira, akatengesa chinhu chavaiva nacho, 2 akavanza imwe yemari yacho, mudzimai wake achizvizivawo, uye akauya nechikamu chete, akachiisa patsoka dzevaapostora.+ 3 Asi Petro akati: “Ananiyasi, nei Satani+ akushingisa kuti uedze kunyengera+ mudzimu mutsvene+ uye kuti uvanze imwe mari yomunda wacho? 4 Kunyange kudai waramba uinawo, waisazongoramba uri wako here, uye watengeswa, mari yacho haina kuramba iri mumaoko ako here? Nei wafunga kuita chinhu chakadai seichi mumwoyo mako? Hauna kuedza kunyengera+ vanhu, asi Mwari.”+ 5 Paakanzwa mashoko aya Ananiyasi akawira pasi, akafa.+ Kutya kukuru+ kwakabata vose vakazvinzwa. 6 Asi majaya akasimuka, akamuputira nemachira,+ akamutakura akaenda naye kunze, akamuviga. 7 Zvino pashure penguva inenge maawa matatu mudzimai wake akapinda, asingazivi zvakanga zvaitika. 8 Petro akati kwaari: “Ndiudze, imi vaviri makatengesa munda nemari yakadai here?” Iye akati: “Hungu, nemari yakadaro.” 9 Naizvozvo Petro akati kwaari: “Nei imi vaviri makabvumirana kuti muedze+ mudzimu waJehovha? Tarira! Tsoka dzevaya vaviga murume wako dziri pasuo, uye vachakutakurawo voenda newe kunze.” 10 Akabva awira pasi patsoka dzaPetro, akafa.+ Majaya acho paakapinda, akamuwana afa, akamutakura akaenda naye kunze, akamuviga parutivi pomurume wake. 11 Naizvozvo kutya kukuru kwakabata ungano yose nevaya vose vakanzwa pamusoro pezvinhu izvi. 12 Zvakare, zviratidzo zvizhinji nezvishamiso zvakaramba zvichiitwa nemaoko evaapostora pakati pevanhu;+ uye vose vaiva nomwoyo mumwe vari muvharanda raSoromoni.+ 13 Chokwadi, hapana kana mumwe chete wevamwe vacho akanga aine ushingi hwokubatana navo;+ kunyange zvakadaro, vanhu vakanga vachivarumbidza.+ 14 Uyezve, varume nevakadzi vazhinjizhinji vaitenda munaShe, vakaramba vachiwedzerwa;+ 15 zvokuti vakatobudisa vairwara kunze mumigwagwa yakafara, vakavaradzika imomo patumibhedha nemaponde, kuti Petro zvaaizopfuura, zvimwe mumvuri wake chete waizowira pane mumwe wavo.+ 16 Uyewo, vazhinji vaibva mumaguta akapoteredza Jerusarema vakaramba vachiungana, vakatakura vanhu vairwara nevaya vainetswa nemidzimu isina kuchena, uye vose vairapwa. 17 Asi mupristi mukuru nevaya vose vaiva naye, boka raivapo panguva iyoyo revaSadhusi, vakasimuka uye vakazadzwa negodo,+ 18 vakabata vaapostora, vakavaisa muchitokisi chaipfigirwa vanhu vose.+ 19 Asi usiku ngirozi yaJehovha+ yakavhura masuo ejeri,+ ikavabudisa kunze, ikati: 20 “Endai, uye kana mamira mutemberi, rambai muchitaura nevanhu mashoko ose pamusoro poupenyu uhu.”+ 21 Pashure pokunzwa izvi, vakapinda mutemberi kwaedza, vakatanga kudzidzisa. Zvino pakasvika mupristi mukuru nevaya vakanga vainaye, vakaunganidza Sanihedrini neungano yose yevarume vakuru vevanakomana vaIsraeri,+ vakatumira vanhu kujeri kuti vaunzwe. 22 Asi pakasvika vakuru vakuru ikoko havana kuvawana vari mujeri. Naizvozvo vakadzoka, vakataura izvozvo, 23 vachiti: “Tawana jeri rakakiyiwa rakachengeteka uye varindi vakamira pamasuo, asi patavhura hapana watawana mukati.” 24 Naizvozvo, mukuru mukuru wetemberi nevapristi vakuru pavakanzwa mashoko aya, vakavhiringidzika kwazvo pamusoro penyaya idzi kuti izvi zvaizovei.+ 25 Asi mumwe murume akasvika, akavaudza kuti: “Tarirai! Varume vamakaisa mujeri vari mutemberi, vakamira havo vachidzidzisa vanhu.”+ 26 Mutarisiri wepatemberi akaenda nevakuru vakuru vake vaimushandira, vakabva vauya navo, asi pasina zvechisimba, zvavaitya+ kutemwa nematombo nevanhu. 27 Naizvozvo vakauya navo, vakavamisa muimba yeSanihedrini. Mupristi mukuru akavabvunzurudza, 28 akati: “Takakurayirai+ kwazvo kuti murege kuramba muchidzidzisa nezvezita iri, asi tarirai! mazadza Jerusarema nokudzidzisa kwenyu,+ uye makatsunga kuunza ropa+ romunhu uyu pamusoro pedu.” 29 Vachipindura, Petro nevamwe vaapostora vakati: “Tinofanira kuteerera Mwari somutongi panzvimbo pevanhu.+ 30 Mwari wemadzitateguru edu akamutsa+ Jesu, wamakauraya, muchimuturika padanda.+ 31 Mwari akakwidziridza iyeyu kuruoko rwake rworudyi+ soMumiririri Mukuru+ noMuponesi,+ kuti ape rupfidzo+ kuna Israeri nokukanganwirwa zvivi.+ 32 Isu tiri zvapupu zvezvinhu izvi,+ pamwe chetewo nomudzimu mutsvene,+ uyo Mwari akapa vaya vanomuteerera somutongi.” 33 Pavakanzwa izvi, vakarwadziwa kwazvo uye vakanga vachida kuvauraya.+ 34 Asi mumwe murume, muFarisi ainzi Gamarieri,+ mudzidzisi woMutemo airemekedzwa nevanhu vose, akasimuka muSanihedrini, akarayira kuti varume vacho vabudiswe kwenguva duku.+ 35 Iye akati kwavari: “Vanhu vaIsraeri,+ zvichenjererei pane zvamunoda kuita pamusoro pevarume ava. 36 Somuenzaniso, mazuva ano asati asvika Tudhasi akamuka, achizviti akanga ari munhu anokosha,+ uye varume vazhinji, vanenge mazana mana, vakabatana neboka rake.+ Asi akaurayiwa, uye vose vaimuteerera vakapararira, zvikashaya basa. 37 Pashure pake Judhasi wokuGarireya akamuka mumazuva okunyoresa,+ akatsausa vanhu kuti vamutevere. Asi murume iyeye akaparara, uye vaya vose vaimuteerera vakapararira kwose kwose. 38 Naizvozvo, pane zviripo izvi, ndinoti kwamuri, Musapindira mune zvevarume ava, asi varegei vakadaro; (nokuti, kana zano iri uye kana basa iri richibva kuvanhu, richaparara;+ 39 asi kana richibva kuna Mwari,+ hamuzokwanisi kuvaparadza;)+ kana zvisina kudaro, chokwadi zvimwe mungawanikwa muchirwisana naMwari.”+ 40 Zvino vakamuteerera, vakashevedza vaapostora, vakavarova,+ vakavarayira kuti varege kutaura pamusoro pezita raJesu,+ vakavarega vachienda. 41 Naizvozvo, ava vakabva zvavo pamberi peSanihedrini, vachifara+ nokuti vakanga vanzi vakakodzera kuzvidzirwa zita rake.+ 42 Mazuva ose vakaramba vachidzidzisa+ nokuzivisa mashoko akanaka pamusoro paiye Kristu Jesu,+ mutemberi uye paimba neimba+ vasingaregi.